Fitaovana fanaraha-maso sy fikorontanan-tsolika any Shina | Milina Morton
Fitaovana fanaraha-maso ny milina
Mitady kalitao tsara kokoa amin'ny famokarana biraon'ny fanaraha-maso milina ve ianao?
Avy eo tonga amin'ny toerana mety.
Afaka mahita mora ny fandidiana Kn Board Machine Board eto ianao.
Vidin'ny asa: USD 100-200 isaky ny PC
Min Tahiry Min: 1 pcs
Fahaiza-mamatsy: setroka 35000 isan-taona
Fepetran'ny fandoavana: T / T
1.Ny singa elektronika tsy manam-petra ho an'ny milina mandondona boribory.
2. Ny fananganana profésorialy amin'ity sehatra ity dia afaka 20 taona.
Morton multi-functioning micro-procesed knitting Controller.Ny lozisialy vita amin'ny micro-processing knun mifehy ity dia fitambaran'ny traikefa an-taonantsika any amin'ny indostrian'ny knitting. Izy io ihany koa no mpanamboatra milina vita amin'ny fiompiana miketrika efa vita sy maharitra.
Ny mpandrindra ny kitapom-pamokarana mikorontana vita amin'ny micro dia manana patanty tokana toy izao eto ambany. Fandehanana amin'ny programa rindrambaiko fanaraha-maso ny zotram-pahefana: afaka misoroka ny mpanendaka izany noho ny fidiran'ny tsy ara-dalàna.
Fandinihan-tena ataon ny ampahany amin'ny fitaovana: afaka misoroka ny fanimbana ny singa mekanika sy ny vatan'olombelona noho ny fahaverezan'ny fambara tsy mahazatra amin'ny alàlan'ny fahasimban'ny singa elektronika.
Fiarovana tonga lafatra ho an'ny fitrandrahana ny onjam-peo:
Izy io dia afaka misoroka ny fahavoazana manimba ny fikafika vokatry ny fikotrahana mikotroka na tsy fahita matetika. Izy io dia mety hiasa amin'ny ankapobeny na dia ao anatin'ny tontolo ratsy aza.
Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana dia azo zahana mivantana amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso: fandidiana: H: 0 60 fanitsiana fizarana. Inching: L: 0 60 fanitsiana fizarana.
Mijanona eo amin'ny sehatry ny masinina milay:
Mandritra ny fanakanana ny toerany dia tsy hitranga amin'ny lampihazo milina ny fisehoan'ny fiparitahana.
Famaritana momba ny tontolon'ny fanaraha-maso ny fampiasana ny faritra isan-karazany:
1.Tapahan-dàlana amin'ny vatan-doko dia maneho hazavana
2. Ny fahatapahana ny vatan-jiro dia maneho hazavana
3.Needle tsy fambara
4. lamba lamba manala maivana
5.Ny tondro tsy mahazatra
6.Mba tsy mahazatra indivator
Previous: Famokarana milina vovoka
Manaraka: Famoriam-bolongana takelaka Rolling Takedown
Tontonana fanaraha-maso marika tsara indrindra any China
Fanjaitra milina Knitting
Knitting Machine screw & Tension
Famokarana milina vovoka
Knitting Machine Air Gun & Pipa
Fehin-kibo fanaovan-jaza knitting